Kutarisa Kwekambani - Sichuan Yibin Tea Viwanda Kunze & Export Co, Ltd.
Kuti utengese chaihwo hukuru hweSichuan kumusika wepasi rose, shandisa zvinobudirira tii zviwanikwa, wedzera mari yevarimi veti, uye nekuwedzera mukurumbira uye mukurumbira weYibin kuburikidza nekutengesa kunze kwenyika, Sichuan Liquor & Tea Boka uye Yibin Shuangxing Tea Viwanda Co. , Ltd pamwe chete yakaisa mari mamiriyoni gumi eRMB kumisikidza SICHUAN YIBIN TEA INDUSTRY IMPORT & EXPORT CO., LTD muna Mbudzi 2020. Sichuan Liquor & Tea Boka rakaisa 60%, Yibin Shuangxing Tea Viwanda Co, Ltd yakaisa 40%.
Nzvimbo yekugadzira yekambani iri muYibin Guta, Dunhu reSichuan, inova nzvimbo huru inogadzira yeti yepamusoro muChina. Iyo ine yakawanda mbishi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro tii. Iyo kambani inemakumi mairi nemakumi maviri emamu kubva ku800 kusvika ku1200 metres organic tii gadheni, mabhii maviri ekugadzira kunze tii. Nenzvimbo yemamirimita zviuru gumi neshanu yemusangano uye goho repagore rinosvika zviuru gumi zvematani, ndiyo yakanyanya mwero, yakachena uye yakakura kwazvo tii yekuburitsa tii kugadzirwa muSichuan Province
Iyo kambani yekuvandudza mamiriro: Kwemakore, kambani yakashanda nemwoyo wese pamwe neSichuan Tea Research Institute kugadzira zvigadzirwa zvakaita se "Shengxing Mingya", "Junshan Cuiming" uye "Junshan Cuiya" mune akateedzana emakwikwi anozivikanwa tii. Vakapihwa mibairo, muna 2006, takahwina mukombe we "Ganlu Cup" yemhando yepamusoro tii mudunhu reSichuan kekutanga.
Muna 2007, takahwina mubairo wekutanga we "Emei Cup" Yakakurumbira Tea Makwikwi. Iyo kambani inokoshesa kukosha kukuru kune chigadzirwa chemhando yekutarisira uye chivakwa chechiratidzo, uye zvakateedzana zvakapasa iyo "ISO9001 International Quality Management System Certification" uye "QS" chigadzirwa kugadzirwa rezinesi chitupa, uye yakapihwa iyo "Yepamberi Hunhu Management Management" kakawanda. "Kudya Kwekuchengetedza Management System ISO22000", "OHSMS Occupational Health uye Safety Management System", "Environmental Management System ISO14001"; zvimwe zvigadzirwa zvasvika pamatanho eEU. Muna 2006, yakaverengerwawo se "China Market Integrity Enterprise" neChina Market Integrity Committee.
Mugore rimwe chetero, iyo "Shengxing" brand trademark yakapihwa zita rekuti "Yibin Guta Rinonyatsozivikanwa Rezviratidzo". Izvo zvigadzirwa zvekambani zvinotengeswa pasirese pasirese uye zvinogamuchirwa zvakanaka nevatengi.
Iyo kambani inonamatira kune bhizinesi uzivi hwe "kurarama nehunhu uye chengetedzo, kushanda nesainzi manejimendi, budiriro nekupayona uye hunyanzvi", uye inotora kutendeka sechinangwa chekuita shamwari, kushandira vatengi uye kutsvaga kwakajairika kusimudzira.
Main zvigadzirwa: Zvigadzirwa zvekambani zvinosanganisira: dema / girini inozivikanwa tii, Chunmee akateedzana, Congou nhema tii uye yakaputswa nhema tii, jasmine tii, nezvimwe.
Kuita kwekutengesa uye network
Iko kuburitsa kwegore rose kunosvika mamirioni zana rmb, iyo yekuwedzera tii kutengesa kunze ingangoita mamirioni gumi emadhora, uye iyo yekuwedzera tii kutengesa kunze ingangoita zviuru zvitatu zvematani. Iyo yekugadzika hwaro hwekambani iri muYibin Guta, Sichuan Province, huru yekugadzira nzvimbo yemhando yepamusoro tii, inotarisana nekudyara tii, kugadzirwa uye kugadzirisa kweanopfuura makore gumi, ndiyo inonyanya kukosha kugadzirwa nekugadzirisa base yeSichuan tii. export. Zvigadzirwa zvinonyanya kutumirwa kuAlgeria, Morocco, Mauritania, Mali, Benin, Senegal, Uzbekistan, Russia, Middle East nedzimwe nyika nematunhu.
Iyo kambani ine yakasimba kushambadzira chigadzirwa kutsvagisa uye timu yekusimudzira, iyo inogona kugadzirisa hunhu hwezvigadzirwa zvinoenderana zvakasiyana mutengi zvinodiwa; Kuti uwane chinangwa chekambani che "kuita zvakasarudzika, kuita zvakanaka, kuita zvakanaka uye kuita kwenguva refu", isarudzo isingadzivisike yekuvandudza iyo pfungwa, kushanda basa uye kuwedzera kugutsikana kwevashandisi.
Uye kubva pane chiitiko chinoshanda chakapfupikisa "mutengi ndini" izwi rega rega uye chiito chekuzivikanwa kwekambani, chidimbu chega chega kuti vabatsire vatengi "iyi pfungwa yebasa, semutungamiri wekambani yese mushure mekutengesa sevhisi.